महामारीमा खटिएका स्वयंसेविकालाई बेवास्ता- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २१, २०७८ मेनुका ढुंगाना
अछाम — कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला भारत र अन्य ठाउँबाट आएकालाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न सबैभन्दा अगाडि देखा पर्थिन् अछामको ढकारी गाउँपालिका–३ की राधिका शाही । भारतबाट आएकालाई भेट्न जाँदा तथा उनीहरूलाई कोरोनासम्बन्धी जानकारी दिँदा परिवारबाट उनलाई असहयोग भयो ।
‘गाउँका अन्य महिलाको तुलनामा रोगबारे हामीलाई बढी जानकारी हुन्छ । त्यसैले जो भेट्यो उसैलाई नआत्तिन आग्रह गर्‍यौं,’ राधिकाले भनिन्, ‘घरमा रोग सारेर ल्याउने भई भनेर सबै कराउँथे । बाहिर गएर मान्छे भेट्ने भए तिमी पनि उतै बस्नु भन्दै घरमा दिनकै गाली गर्थे । तर म आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा भइनँ ।’
कोरोना संक्रमण समुदायसम्म फैलिएपछि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अग्रपंक्तिमा खटाइयो । संक्रमणको त्रासले आत्तिएका सर्वसाधारणलाई सम्झाइबुझाइ गर्नमा उनीहरू नै सबैभन्दा अगाडि देखिए । डरका कारण स्वास्थ्य संस्थामा समेत जान नसकेकालाई उनीहरूले नै परामर्श दिए । जोखिमका बेला समुदायमा सबैभन्दा बढी खट्ने स्वयंसेविका भए पनि कामअनुसारको मूल्यांकन नभएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘गाउँमा कोरोना संक्रमणका लक्षण देखिँदा स्वास्थ्य संस्थामा जान आग्रह गर्ने, सम्झाइबुझाइ गर्ने नै हामी हौं,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा मास्कसम्म त पाएका थियौं । पछि त्यो पनि पाइएन । जोखिम भत्ता त झन् के पाइन्थ्यो ।’
मंगलसेन नगरपालिका–५ की मंगला विक २६ वर्षदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छिन् । गाउँमा दलित बस्ती बढी छ । दलित बस्तीको संख्या धेरै भएकाले उनलाई स्वयंसेविका बनाउन गाउँलेले समर्थन गरे । गाउँमै भएका गैरदलितका घरमा पनि उनले धेरैपटक जानुपर्थ्यो । त्यतिबेला उनलाई दलित घरमा आएको भन्दै सार्वजनिक ठाउँमै धेरै पटक विभेद गरे । तर उनै मंगला विक कोरोना संक्रमणका बेला घरदैलोमा पुगेर सुझाव दिन थालिन् । लकडाउनका कारण घरमा आउन नसकेकाको घरमा गएर उनले सम्झाउन थालिन् । ‘त्यो बेला गैरदलित महिलाले हामी दलितका घरमा जाँदैनौं भनेर मैले अवसर पाएकी हुँ । धेरै गाली पाइयो । कुटाइ खाने अवस्थासमेत आयो । अहिले भने सबैले बुझे,’ उनले त्यसबेलाको अनुभव स्मरण गरिन् ।
कोरोना संक्रमणको सुरुमा मंगलालाई समुदायसम्म पुग्नै गाह्रो भयो । ‘सुरुमा सम्झाउन जाँदा कोरोना सार्न आई भनेर धेरैले गाली पनि गरे । तर मैले भौतिक दूरी कायम गर्दै आत्तिएका परिवारलाई सम्झाउन छोडिनँ,’ उनले भनिन् । जोखिम मोलेर कोरोना कालमा खटिएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामको स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामी आफूले जाने बुझेका कुरा अरूलाई सिकाउन पछि पर्दैनौं । हाम्रो कामको कुनै निकायले मूल्यांकन गरिदिनुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।
५५ वर्षीया मंगला २८ वर्षसम्म महिला स्वाथ्य स्वयंसेविका भएर आफ्नो टोलमा बिरामीको सेवा गरिरहेकी छन् । गाह्रो, अप्ठ्यारोमा सबैभन्दा पहिले गाउँलेहरू उनैलाई सम्झन्छन् । अहिलेसम्म उनले टोलका बिरामी र गर्भवतीलाई बोकेर स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याएकी छन् । संक्रमण फैलिएका बेला आफूजस्तै अछामका १० वटा स्थानीय तहमा ९ सय ४१ जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेको उनले बताइन् । ‘यसरी खटिने हामीलाई राज्यले अहिलेसम्म प्रोत्साहनस्वरूप नै सही केही दिएको छैन । त्यही काम गर्ने अरू स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाउने, अनि हामीले किन नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ १०:५६
पर्वत अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट
पर्वत — कोरोना महामारी तथा श्वासप्रश्वासका लागि आवश्यक अक्सिजन खरिदका लागि अब पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा पर्वत अस्पतालमा दैनिक ४० सिलिन्डर क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएपछि उक्त बाध्यता हटेको हो ।
जिल्लाका विभिन्न लायन्स क्लब, नेपाल चिकित्सक संघ र चुजी फाउन्डेसन ताइवानको एक करोड बढीको सहयोगमा प्लान्ट स्थापना गरिएको हो ।
२ वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले ७५ लाखको लागतमा जडान गरेको अक्सिजन प्लान्टले काम नगरेपछि दातृ निकायको सहयोगमा प्लान्ट जुटाइएको हो । नयाँ प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि अस्पतालको क्षमताअनुसारका बिरामीका लागि आवश्यक अक्सिजन बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने समस्या नहुने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. ढुण्डीराज पौडेलले बताए ।
प्लान्ट स्थापनासँगै सिलिन्डरमा रिफिलिङ र नवनिर्मित भवनको इमर्जेन्सी वार्डमा वायरिङको काम सुरु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी लक्ष्मण शर्माले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा नवनिर्मित ५० शय्या क्षमताको भवन सञ्चालनमा आउने बेलासम्म अक्सिजन प्लान्टसमेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ । ‘अहिले हामीले जोडेको विद्युत् क्षमता पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘जेनेरेटर चलाउन मिल्नेगरी क्षमता बढाउन निवेदन दिएका छौं । विद्युत् पर्याप्त भएपछि अरू काम अघि बढाउँछौं ।’
यसअघि सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न आवश्यक कम्प्रेसरको अभावमा पोखरा पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । कम्प्रेसर मेसिनसहित उपकरण जडान भए पनि त्यसको सञ्चालनका लागि २ सय २० वाटभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् आवश्यक पर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । त्यसका लागि छुट्टै ट्रान्सफर्मरसहितका विद्युतीय उपकरणहरू आवश्यक पर्ने भएकाले विद्युत् कार्यालयसँग आवश्यक छलफल भइरहेको छ । विद्युत् व्यवस्थापनका लागि मात्रै करिब १२ लाख खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
१५ शय्या क्षमतामा रहेको अस्पताल ५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्न निर्माणाधीन भवनको काम अन्तिम चरणमा छ । अक्सिजन सिलिन्डरमा भर्नका लागि केही प्राविधिक काम मात्रै बाँकी रहेकाले नयाँ भवनबाट सेवा सुरु हुने समयसम्म सबै काम सकिने अस्पतालका एमडीजीपी डा. धनबहादुर छेत्रीले बताए । ‘रिफिलिङ एक्युपमेन्ट आइसकेपछि सबै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जडानमा अरू लागत खर्च छैन ।’
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ १०:४२